अस्ट्रेलिया को सिड्नी मा नमस्ते रेष्टुरेन्ट , काम खोजि रहनु भएको छ भने शिघ्र सम्पर्क गर्न होला ! – jagritikhabar.com
अस्ट्रेलिया को सिड्नी मा नमस्ते रेष्टुरेन्ट , काम खोजि रहनु भएको छ भने शिघ्र सम्पर्क गर्न होला !
बिगत १४ वर्ष देखि अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्दै आउनु भएका गम्भीर सापकोटा, अध्ययनको शिलशिलामा २००६ मा अस्ट्रेलिया आउनु भएको थियो। भरतपुर चितवनमा जन्मिनु भएका सापकोटाको बिद्यार्थी जीवन अन्य बिद्यार्थी जस्तै रहेको तर जीवनमा केहि गर्नु पर्छ भनेर भावी योजना सहित कार्य गर्दै गर्दा यो पोजिसन सम्म आउन सफल भएको ओएस नेपाल सगको कुराकानीमा जानकारी दिनु भएको थिए। कुकरी अध्ययन गरेका सापकोटाले २०१८ मा अस्ट्रेलियाको स्टारफिल्डमा नमस्ते नेपाली इन्डीयन रेस्टुरेन्ट खोलि नेपाली परिकारको स्वाद पस्किन सुरु गर्नु भएको थियो।
ट्रमा सेन्टरको अपिल : ‘बिरामी छटपटाइरहेका छन्, कसैले अक्सिजन सहयोग गरिदिनुहोस्’
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले अक्सिजन अभावले एक सय पाँच जना बिरामी छटपटाइरहेको भन्दै सहयोगको अपिल गरेको छ ।
बिहान आठ बजेदेखि अक्सिजन पुरै ठप्प भएकोले बिरामी छटपटाइरहेको कोरोना व्यवस्थापन समितिका सदस्य भुवन केसीले रातभरि विभिन्न ठाउँमा गएर अक्सिजनको जोहो गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बिरामी बचाउन मुस्किल भइरहेको भन्दै सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ । ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका सबै बिरामीलाई हाइ फ्लो अक्सिजनको जरुरी छ । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक सन्तोष पौडेल र कोरोना व्यवस्थापन समितिका सदस्य भुवन केसीले रातभरि विभिन्न ठाउँमा गएर अक्सिजनको जोहो गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको जानकारी दिनुभयो ।
ट्रमा सेन्टरले अक्सिजन ल्याउने शंकर अक्सिजन उद्योग बालाजुमा रातभरि कुर्दा पनि अक्सिजन पाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । ट्रमा सेन्टरमा दैनिक चार सय सिलिण्डर अक्सिजन चाहिनेमा सीसीएमसीले १ सय ५० वटाको कोटा तोकिदिएको छ, त्यै एक सय ५० वटा सिलिण्डर पाउन पनि मुस्किल रहेको केसीले बताउनुभयो ।